1 Madzimambo 16:1-34
16 Zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Jehu+ mwanakomana waHananai+ pamusoro paBhaasha, richiti: 2 “Zvandakakusimudza muguruva+ kuti ndikuite mutungamiriri wevanhu vangu vaIsraeri,+ ukafamba munzira yaJerobhoamu,+ ukaita kuti vanhu vangu vaIsraeri vatadze nokundigumbura nezvivi zvavo,+ 3 tarira ndiri kutevera ndichitsvaira Bhaasha neimba yake, ndichaita kuti imba yake ive seimba yaJerobhoamu mwanakomana waNebhati.+ 4 Ani naani waBhaasha achafira muguta achadyiwa nembwa; uye ani naani wake achafira kusango achadyiwa neshiri dzokumatenga.”+ 5 Mamwe mabasa ose aBhaasha nezvaakaita nokuva kwake nesimba, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri? 6 Bhaasha akazorara nemadzitateguru ake, akavigwa muTiza;+ uye mwanakomana wake Eraa akatanga kutonga panzvimbo pake. 7 Shoko raJehovha rakanga rauyawo nokumuprofita Jehu mwanakomana waHananai, pamusoro paBhaasha neimba yake,+ nokuda kwezvakaipa zvose zvaakaita pamberi paJehovha nokumugumbura+ nebasa remaoko ake,+ kuti iite seimba yaJerobhoamu, nokuti iye akamuuraya.+ 8 Mugore rechimakumi maviri nematanhatu raAsa mambo waJudha, Eraa mwanakomana waBhaasha akava mambo waIsraeri muTiza kwemakore maviri. 9 Mushandi wake Zimri,+ mukuru wehafu yengoro akamumukira, paaiva muTiza achinwa+ kusvikira adhakwa ari paimba yaAriza, uya aitarisira imba+ yaiva muTiza. 10 Zimri akapinda, akamurwisa,+ akamuuraya mugore rechimakumi maviri nemanomwe raAsa mambo waJudha, akatanga kutonga panzvimbo pake. 11 Paakatanga kutonga, paakangogara pachigaro chake choumambo, akauraya imba yose yaBhaasha. Haana kusiya kana munhurume+ wokwake kana vatsivi vake veropa+ kana shamwari dzake. 12 Nokudaro Zimri akatsakatisa imba yose yaBhaasha,+ maererano neshoko raJehovha+ raakanga ataura pamusoro paBhaasha achishandisa muprofita Jehu,+ 13 nokuda kwezvivi zvose zvaBhaasha nezvivi zvaEraa+ mwanakomana wake zvavakaita uye zvavakatadzisa Israeri nazvo nokugumbura Jehovha Mwari waIsraeri nezvidhori zvavo zvisina zvazvinobatsira.+ 14 Mamwe mabasa ose aEraa nezvose zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri? 15 Mugore rechimakumi maviri nemanomwe raAsa mambo waJudha, Zimri akava mambo kwemazuva manomwe+ muTiza, vanhu pavakanga vakakomba Gibhetoni,+ raiva revaFiristiya. 16 Kwapera nguva yakati, vanhu vakanga vakadzika musasa vakanzwa zvichinzi: “Zimri amukira akaurayawo mambo.” Naizvozvo vaIsraeri vose vakagadza Omri,+ mukuru weuto, kuti ave mambo waIsraeri pazuva iroro mumusasa. 17 Zvino Omri nevaIsraeri vose vaaiva navo vakabva kuGibhetoni vakatanga kukomba+ Tiza. 18 Zimri paakangoona kuti guta rakanga ratorwa, akabva apinda mushongwe yokugara yeimba yamambo, akapisa imba yamambo nomoto iye arimo, zvokuti akafa,+ 19 nokuda kwezvivi zvake zvaakanga aita nokuita zvakaipa pamberi paJehovha+ nokufamba munzira yaJerobhoamu nomuchivi chake chaakaita nokutadzisa Israeri.+ 20 Mamwe mabasa ose aZimri nokumukira kwake kwaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri? 21 Panguva iyoyo ndipo pakatanga vanhu vaIsraeri kukamukana kuva mapoka maviri.+ Kwaiva neboka revanhu rakava vateveri vaTibni mwanakomana waGinati, kuti rimuite mambo, rimwe boka rikava vateveri vaOmri. 22 Vanhu vaitevera Omri vakazokunda vanhu vaitevera Tibni mwanakomana waGinati; zvokuti Tibni akaurayiwa, Omri akatanga kutonga. 23 Mugore rechimakumi matatu nerimwe chete raAsa mambo waJudha, Omri akava mambo waIsraeri kwemakore gumi nemaviri. Akatonga kwemakore matanhatu ari muTiza. 24 Akatenga gomo reSamariya kuna Shemeri nematarenda maviri esirivha, akatanga kuvaka pagomo racho ndokutumidza guta racho raakanga avaka kuti Samariya,+ zita raShemeri tenzi wegomo racho. 25 Omri akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha uye akaita zvakaipa kwazvo kupfuura vose vakamutangira.+ 26 Akafamba munzira dzose dzaJerobhoamu mwanakomana waNebhati,+ nomuchivi chake chaakatadzisa Israeri nacho nokugumbura Jehovha Mwari waIsraeri nezvidhori zvavo zvisina zvazvinobatsira.+ 27 Mamwe mabasa ose aOmri, zvaakaita nokuva nesimba kwake, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri? 28 Omri akazorara nemadzitateguru ake, akavigwa muSamariya; uye mwanakomana wake Ahabhi+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 29 Ahabhi mwanakomana waOmri akava mambo waIsraeri mugore rechimakumi matatu nemasere raAsa mambo waJudha; uye Ahabhi mwanakomana waOmri akaramba achitonga Israeri ari muSamariya+ kwemakore makumi maviri nemaviri. 30 Ahabhi mwanakomana waOmri akaita zvakaipa kwazvo pamberi paJehovha kupfuura vose vakamutangira.+ 31 Zvino, sokunge kuti chaiva chinhu chiduku+ kwazvo kwaari kuti afambe muzvivi zvaJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, iye akatora Jezebheri+ mwanasikana waEtibhaari mambo wevaSidhoni+ kuti ave mudzimai+ wake, akatanga kuenda kunoshumira Bhaari+ nokumukotamira. 32 Uyezve, akamisira Bhaari atari paimba+ yaBhaari yaakavaka muSamariya. 33 Ahabhi akagadzira danda dzvene;+ uye Ahabhi akawedzera kugumbura+ Jehovha Mwari waIsraeri kupfuura madzimambo ose aIsraeri akanga amutangira. 34 Hieri muBheteri akavaka Jeriko mumazuva ake. Akarasikirwa naAbhiramu dangwe rake paakavaka nheyo dzaro, uye akarasikirwa naSegubhu gotwe rake paakamisa masuo aro, maererano neshoko raJehovha raakataura achishandisa Joshua mwanakomana waNuni.+